फेक रेस्क्यू : थन्कियो प्रतिवेदन, कसैलाई कारवाही भएन Global TV Nepal
शनिबार, जेष्ठ १, २०७८ Saturday 15th May 2021
अक्सिजन, आईसीयू बेड र खोपको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग सभापति देउवाको आग्रह काँग्रेस उपसभापति गच्छदारपत्नी निर्मलाको निधन भारतमा एकै दिन ३ लाख २६ हजार संक्रमित पुष्टि, पछिल्ला दिनमा संक्रमणको दर घट्यो इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीको पुनरागमन जित विपक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको व्यङ्य : सरकार बनाउन नसकेपछि प्रतिगमन ! २०३ जनाको मृत्यु, आठ हजार ५२० संक्रमित ओली पक्षसँगको अडान छाडेका छैनौँ : नेता रावल प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
शंकर मोक्तान । पर्यटकलाई नक्कली उद्दार गरि ठगी गर्ने कम्पनीलाई अझै कारवाही हुन सकेको छैन । फेक रेस्क्यूमा संलग्नलाई कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७५ साउनमा सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्रचार गरेको थियो । पत्राचार गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कुनै पनि कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छैन । नेपाल आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्दारको नाममा ठगी गरेको भन्दै १५ संस्थालाई कारबाही गर्न पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको बताए । तर, किन कारवाही भएन यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरिएको उनको जवाफ छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई २०७५मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । बिमा कम्पनीलाई ठग्न नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई खानामा विभिन्न पदार्थ मिसाएर बिरामी बनाउने र उनीहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भए पछि फेक रेस्क्यू प्रतिवेदन नै थन्किएको छ ।
फेक रेस्क्यूमा संलग्न कम्पनीहरु
पर्यटन मन्त्रालयले विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राका क्रममा उद्धार गर्दा चर्काे असुली गरेको विषयमा छानबिन समितिले १५ संस्थाको संलग्नता देखिएको थियो । ८ ट्राभल तथा उद्धार संस्था र ४ अस्पताल र ३ हेलिकप्टर कम्पनी रहेका छन् ।
ट्राभल तथा उद्धार संस्था
हिमालय सोसल जर्नी
न्यू ईरा र सिविक छन् ।
छानबिन प्रतिवेदनमा एउटै अस्पतालले उद्धारपछि उपचारको बिमा रकम ६० लाखसम्म दाबी गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, उद्धार संस्थाले पर्यटकसँग उद्धारका नाममा ६५ लाख बिमा दाबी गरेको भेटिएको थियो । पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई बिरामी बनाएर वा बिरामी अवस्थामा उद्धार गरेर हेलिकप्टर, ट्राभल कम्पनी र अस्पतालले आपसी मिलेमतोमा बीमा रकम दाबी गरी ठगी गर्दै आइरहेका थिए ।
पोखरेलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमालेको निर्णय
ओलीको हठपूर्ण कदम : संसद बिघटन गर्न सिफारिश
सर्वोच्चको फैसलापछि ऋषि कट्टेलले भने–मैले न्याय पाएँ
एकै दिन ३५ जनाको मृत्यु, चार हजार ९२८ संक्रमित थपिए
निष्ठाका प्रतिमूर्ति स्व. तामाङको स्मरणमा दिप प्रज्वलन
अक्सिजन, आईसीयू बेड र खोपको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग सभापति देउवाको आग्रह
विपक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको व्यङ्य : सरकार बनाउन नसकेपछि प्रतिगमन !
२०३ जनाको मृत्यु, आठ हजार ५२० संक्रमित
ओली पक्षसँगको अडान छाडेका छैनौँ : नेता रावल
ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु रहस्यमय : नेता पौडेल